အကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုပစ္စည်းများ၊ သင်၏လွယ်ကူ ၀ ယ်ယူနည်းလမ်းညွှန် (၂၀၁၉) - ကျန်းမာရေး | ဇန္နဝါရီလ 2022
ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ရပ်ရွာ ဆီးဂိမ်း ပြင်းထန်သောအားကစား ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ဖျော်ဖြေရေး မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး နှိပ်ပါ သတင်း ကုန်ပစ္စည်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက်
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> အကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုပစ္စည်းများ၊ သင်၏လွယ်ကူသော ၀ ယ်ယူနည်းလမ်းညွှန်
အကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုပစ္စည်းများ၊ သင်၏လွယ်ကူသော ၀ ယ်ယူနည်းလမ်းညွှန်
နွေရာသီတွင်များသောအားဖြင့်ခြစ်ရာများနှင့်အမည်းများပါလာသည်။ အံ့သြဖွယ်တောင်တက်စွန့်စားမှုများ၊ စကိတ်စီးနည်းအသစ်များနှင့်ရေကူးကန်၌ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သောမည်သည့်အရာမဆိုသင်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုဆေးသေတ္တာများဖြင့်ကုသနေသည် (သေချာကုသပါ) ။
ပတ်တီးများနှင့်လိမ်းဆေးများကိုသာမတွေးပါနှင့်၊ ဤဆေးအချို့သည်စိတ်ဒဏ်ရာရှင်သန်မှုပစ္စည်းများ၊ အားကစားအတွက်သီးသန့်ပစ္စည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်းသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ဆိုးရွားလာသောအခါစိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း (သို့) ခေါင်းရှုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ဤကိရိယာများအားလုံးကိုအလွန်ကောင်းမွန်စေသည် - သင်မည်သည့်အခြေအနေ၌မဆိုသင်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပစ္စည်းများနှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
သင်အွန်လိုင်းမှအကောင်းဆုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးသေတ္တာများထဲမှ ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သင်သည်နေရာမှန်၌ရှိနေသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုများ။ ငါအဲဒါကိုငါးအထိမကျဉ်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဤတစ်ခုစီသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Surviveware မှ Small & Portable ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
၉၁% (!!)5star reviews *****
စျေးနှုန်း: ၃၆.၉၅ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
ANSI/OSHA နှင့်ကိုက်ညီသောလုပ်ငန်းခွင်ရှေး ဦး သူနာပြုအဖွဲ့ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ANSI/OSHA နှင့်ကိုက်ညီသည်
ရှေး ဦး သူနာပြုလမ်းညွှန်ပါဝင်သည်
စျေးနှုန်း: ၁၃၉.၉၈ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
MOLLE အိတ်ဒဏ်ရာ Trauma အရေးပေါ်ကိရိယာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ရှင်သန်ရေးပစ္စည်းသာဖြစ်သည် - ဤတွင် bandaids မရှိပါ
ရဲ၊ စစ်တပ်၊ ဆေးသမားများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်
Hiking & Camping အတွက် Mini First Aid Kit Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အလေးချိန် ၅ အောင်စသာရှိသည်
စျေးနှုန်း: ၁၉.၄၅ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
ကွင်းပြင်အားကစားထိခိုက်ဒဏ်ရာများအတွက်အားကစားရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
စျေးနှုန်း: ၃၄.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
A+ Modular EMS/EMT စိတ်ဒဏ်ရာရှေး ဦး သူနာပြုတုံ့ပြန်မှုအိတ် Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
EMS သို့မဟုတ် EMT off-on-duty အတွက်အလွန်ကောင်းသည်
စျေးနှုန်း: ၃၀၉.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Surviveware မှအသေးစားနှင့်သယ်ယူနိုင်သောရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာ
စျေးနှုန်း: ၃၆.၉၅ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
Tourniquet ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ သတိရပါ၊ ၎င်းသည်တစ်ပေါင်သာအလေးချိန်ရှိသောအခြေခံကိရိယာဖြစ်သည်။
ဤအရာသည်သင်၏စံ၊ သင့်လျော်သောအရာအားလုံးအတွက်ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာအစုံဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချပါ၊ သင်၏ကား၌ထားပါ၊ တွဲလောင်းလျှောလျှောသွားလျှင်၎င်းအားသင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်တွယ်ပါ။ ဤကိရိယာသည်တာရှည်ခံ၊ ရေစိုခံ၊ ပေါ့ပါး၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောနေရာတိုင်း၌ဒဏ်ရာအသေးစားများအတွက်ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူစေသည်။
Surviveware မှ Small & Portable ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာကိုဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ။
2.4Shelf ANSI/OSHA Compliant All Purpose First Aid Cabinet for Workplace, Wall Mountable, 1.110 Pieces by Rapid Care First Aid
စျေးနှုန်း: ၁၃၉.၉၈ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ANSI/OSHA Compliant
ကြယ်ငါးပွင့်ဖြစ်နေစဉ်တွင်၎င်းသည် overkill နီးပါးသိုလှောင်ထားသည်ဟုသုံးသပ်ချက်များကဆိုသည်
ရှေး ဦး သူနာပြုလမ်းညွှန်တစ်ခုပါလာသည်
လူအချို့သည်ပျောက်ဆုံးနေသောသို့မဟုတ်ပြန့်ကျဲနေသောအရာများအားအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ QA သို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးမှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်
၎င်းသည်ရိုးရိုးအဖြူရောင်ကက်ဘိနက်ဖြစ်သည်။ သင်လိုလျှင် (သို့) လိုလျှင်၎င်းကိုရှေး ဦး သူနာပြုစုခြင်းဟုတံဆိပ်တပ်ပါ။
ANSI နှင့် OSHA နှင့်အညီ၊ ဤသည်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုဆေးသေတ္တာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်ညှိနှိုင်းသံမဏိသေတ္တာသည်အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်လူ ၂၅၀ အထိဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။ ၎င်းကိုနံရံသို့တပ်ဆင်နိုင်သည်။ Rapid Care ရှေး ဦး သူနာပြုအကူပစ္စည်းသည်ရုံးများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၊ ကျောင်းများ၊ ဂိုဒေါင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မင်းကိုအိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းဆွဲထားတာကိုဘယ်သူမှတားမှာမဟုတ်ဘူး။
စင်ပေါ်အရေအတွက်၊ ပစ္စည်းအရေအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောလူ ဦး ရေနှင့်သင် Class A+ ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာသို့ပင်အဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။
4 Shelf ANSI/OSHA Compliant All Purpose First Aid Cabinet, Wall Mountable, 1.110 Pieces အား Rapid Care ရှေး ဦး သူနာပြုစုခြင်းဖြင့်ဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ။
၃။ အကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုပစ္စည်းများ၊ MOLLE အိတ်ဒဏ်ရာ Trauma အရေးပေါ်ကိရိယာ။ Lightning X မှ Tactical Medics, Military, Outdoor, Enthusiasts များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်
MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) စနစ်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်
ရဲ၊ စစ်တပ်နှင့်နည်းဗျူဟာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ တောင်တက်သမားများ၊ အသက်ရှင်သန်သူများ၊ စခန်းချသူများနှင့်အပြင်ထွက်အမျိုးသားများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ဒီမှာနောက်ထပ် tourniquet ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်းတို့ကို C-A-T (Combat Application Tourniquet) ဖြင့်ထုတ်ပါ။ မင်းဒီကရိယာလိုအပ်ရင်ဘယ်မှမသွားဘူးဆိုရင်ဒါကမင်းသေချာရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်တဲ့အရာဘဲ။ အဲဒါကမင်းရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်တယ်။
ပုံမှန်ပတ်တီးများ (သို့) မည်သည့်အရာမှမပါဝင်ပါ - ၎င်းသည်ဤထက်ပိုကြီးမားသောအရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်
Tetris ကိုကစားရန်လိုသည်၊ သို့သော်အရာအားလုံးသည်နေရာကျဉ်းကျဉ်း၌အဆင်ပြေသည်
ဤအမာခံအရေးပေါ်ကိရိယာနှင့်ရှင်သန်ရန်အဆင်သင့်နေပါ။ Lightning X စိတ်ဒဏ်ရာဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွင်ကွင်းပြင်၌အရေးပေါ်ဒဏ်ရာများနှင့်ဒဏ်ရာများအားကုသရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်ရှေး ဦး သူနာပြုအကူပစ္စည်းများနှင့်ရှင်သန်ရေးကိရိယာများနှင့်ပြည့်နေသည်။ အဖြစ်များသောပစ္စည်းများတွင်အမြန်သွေးခဲစေသော Hemostat gauze pads, trauma shears နှင့် Israeli Pressure Bandage တို့ပါဝင်သည်။
Elastic သိုလှောင်မှုကွင်း ၈ ခု၊ အိတ်များနှင့်ကွက်များသည်ဤစစ်တပ်အဆင့်ရှေး ဦး သူနာပြုအကူကိရိယာကိုအတူတကွကိုင်ထားသည်။ ရေသို့မဟုတ်ရာသီဥတုဆိုးရွားလျှင်ရေနုတ်မြောင်းများအတွက် grommet ပါ ၀ င်သည်။ အရောင်မျိုးစုံရနိုင်ပါတယ်။
Lightning X မှ Tactical Medics, Military, Outdoor, Enthusiasts များအတွက်စံပြ MOLLE Pouch Trauma အရေးပေါ် Kit ကို ၀ ယ်ပါ။
ဗွီဒီယိုအကောင်းဆုံးရှေး ဦး သူနာပြုစုဆေးများနှင့်ဆက်နွယ်သောဗီဒီယို: molle အိတ်ဒဏ်ရာစိတ်ဒဏ်ရာအရေးပေါ်ကိရိယာ။ လျှပ်စီး x အားဖြင့်နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာဆေးပညာရှင်များ၊ စစ်တပ်၊ ပြင်ပဝါသနာရှင်များအတွက်စံပြဖြစ်သည်2018-10-18T20: 58: 16-04: 00
Run2Win Safety မှ Hiking & Camping အတွက် Mini First Aid Kit
စျေးနှုန်း: ၁၉.၄၅ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
မိဘများ၊ တက်ကြွသောကလေးများအတွက်သင်၏အနှီးအိတ်၊ ကားသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်တို့တွင်တစ်ခုထားပါ။ တောင်တက်သမားများ၊ စက်ဘီးစီးသမားများနှင့်မုဆိုးများ၊ ထိုနေရာတွင်သင်သတိတောင်မထားမိပါ။ ခရီးသွားများသည် TSA မှတဆင့်သွားကြသည်။
အတွင်း၊ အပြင်၊ USA တွင်ထုတ်လုပ်သည်။ ၁၀၀% ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ မေးခွန်းများမမေးပါ
သုံးစွဲသူတစ် ဦး က၎င်းသည်အတွင်းမှပစ္စည်းများပမာဏအတွက်အလွန်စျေးကြီးသည်ဟုခံစားသည်။
ဒီရှေး ဦး သူနာပြုအကူပစ္စည်းလေးကမင်းရဲ့လက်ဖဝါးထဲကိုထည့်ထားတုန်းလိုအပ်သမျှအားလုံးကိုထုပ်ပိုးပေးတယ်။ ခိုင်ခံ့သောဇစ်နှင့်အကြမ်းခံအခွံသည်အတွင်းပိုင်းရှိအရာများကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်ရန်ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ထားသည်။ မင်းမှာအလေးချိန်မလိုတော့ဘဲရှေး ဦး သူနာပြုအကူပစ္စည်းထဲကို ၀ င်သွားရင်မင်းပထမဆုံးလက်လှမ်းမှီနိုင်မယ့်စံသတ်မှတ်ချက်တွေအားလုံးရှိတယ်။ မင်းမှာသေးငယ်တဲ့ဒဏ်ရာ၊ ခြစ်ရာတွေ၊ အပူလောင်မှုတွေအတွက်သယ်ဖို့ပေါ့ပါးတဲ့အရာတစ်ခုကိုရှာနေရင်ဒီ minimalist kit ကပြီးပြည့်စုံတယ်။
USA မှပြုလုပ်သောပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ထုပ်ပိုးနိုင်သောရေစိုခံအိတ်များတွင်တံဆိပ်တပ်ထားသည်။ ဒီနေရာမှာသုံးသပ်ချက်အများစုကအပြုသဘောဆောင်တယ်၊ ၉၇% ကကြယ် ၄ ပွင့်ထက်ပိုမြင့်တယ်၊ ReviewMeta.com သူတို့ကအတုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။
Run2Win Safety မှ Hiking & Camping အတွက် Mini First Aid Kit ကိုဒီမှာ ၀ ယ်ပါ။
Net World Sports မှကွင်းဆင်းအားကစားထိခိုက်ဒဏ်ရာများအတွက်အားကစားအဖွဲ့မှရှေး ဦး သူနာပြုစုနည်း ၅
စျေးနှုန်း: ၃၄.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
ဘောလုံး၊ ဘောလုံး၊ lacrosse၊ ရပ်ဘီ၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ တင်းနစ်၊ ဘေ့စ်ဘော၊ ဘော်လီဘော၊ ဟော်ကီ - ဤအဖွဲ့များအားလုံးသည်ဤကိရိယာမှပိုမိုအကျိုးခံစားလိမ့်မည်။
အခမဲ့ Prime ပို့ဆောင်ခနှင့်မပါပါ
အားကစားနှင့်ပတ်သက်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့များပါ ၀ င်သည့်ဤကိရိယာနှင့်အတူကွင်းပြင်၌မည်သည့်သေးငယ်သည့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကိုမဆိုတက်ရောက်ပါ။ ပုံမှန်ပတ်တီး မှလွဲ၍ မျက်နှာအကာအကွယ်များ၊ အဝတ်အစားများ၊ ချက်ချင်းရေခဲထုပ်၊ တိပ်နှင့်အခြားအရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤဆေးပစ္စည်းသည်ကျောင်းများ၊ အားကစားရုံများနှင့်အားကစားရုံများအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပြီးအထူးသဖြင့်အဖွဲ့လိုက်အားကစားဒဏ်ရာများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသည်။
Net World Sports မှကွင်းပြင်အားကစားထိခိုက်ဒဏ်ရာများအတွက်အားကစားအဖွဲ့၏ရှေး ဦး သူနာပြုကိရိယာကိုဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ။
စျေးနှုန်း: ၃၀၉.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
သူတို့ကတာဝန်မကျေတဲ့ကိစ္စမှာကူညီဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ချင်ရင်သူတို့ရဲ့ off-duty EMS/EMT အတွက်သူတို့ရဲ့ကားတွေကိုထားဖို့ကအရမ်းအေးတယ်။
အထူးပွဲများ၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ကျောင်းခရီးများ၊ နေ့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အားကစားပွဲများအတွက်လက်ထဲတွင်ရှိသည်
Buckle tourniquet ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းသည်၊ သို့သော်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန် Combat Application Tourniquet သို့အဆင့်မြှင့်ပါ။
အရေးပေါ်အခြေအနေ၌သင်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုထုပ်ပိုးထားသော Lightning X EMS/EMT စိတ်ဒဏ်ရာအိတ်သည်သင့်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြင်ဘက်တွင် fluorescent လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အပြာရင့်ရောင်ရရှိနိုင်ပြီး၊ အတွင်းပိုင်းကိုအရောင်ညှိနှိုင်းထားပြီးအရေးကြီးအခြေအနေများတွင်လျင်မြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးထားသည်။ အိတ်၏အရှည်နှင့်ရှေ့နှင့်ဘေးဘက်အိတ်များအတွင်းတွင်ဇစ်ပါသောအိတ်သုံးလုံးပါ ၀ င်သောသင်၏ဆေးပစ္စည်းအထောက်အပံ့များကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။
ရောင်ပြန်တိပ်ပါ ၀ င်သောအိတ်၏အောက်တစ်ဝက်သည်ရေနှင့်ခြစ်ရာကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဖြုတ်နိုင်သောကဏ္sectionsများသည်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်သည်။ သူတို့ကမင်းရဲ့အသုံးအဆောင်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေထည့်ဖို့မင်းအတွက်အပိုအခန်းနည်းနည်းထည့်ပေးထားတယ်။
Lightning X ၏ Premium Stocked Modular EMS/EMT Trauma ရှေး ဦး သူနာပြုဆေးဝါးအိတ် (သို့) ကျောပိုးအိတ်ကိုဤနေရာတွင် ၀ ယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး DNA စစ်ဆေးမှုကိရိယာ ၁၀ ခု - မင်းအတွက်ဘယ်ဟာမှန်လဲ။ (၂၀၁၉)
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့် Sleep Solutions (2019)
valium နှင့် xanax သည်မည်သည့်ဆေးအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်သနည်း။